चितवनमा चोरको बितण्डा: सुन पसलदेखि अमिलोको पत्तासम्म चोरी – Nepaliko Aawaj
चितवनमा चोरको बितण्डा: सुन पसलदेखि अमिलोको पत्तासम्म चोरी
प्रकाशित मिति: बुधबार, पौष ०२, २०७६ | ५:०६:०२
चितवन । चितवनमा चोरको लीलानै देखिएको छ । उनिहरुले सुन पसल देखी पत्ता अमिलो सम्मको चोरी गरेको पाइएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले सुन देखि अमिलो सम्मको चोरीको घटनामा संलग्न ३ जना चोरहरुलाई सोमबार पत्रकार सम्मेलन मार्फत सार्वजनिक गरेको हो । प्रहरीले दिएको जानकारी अनुसार पक्राउ पर्नेहरुमा सप्तरी जिल्ला राजबिराज न.पा.वडा नं. ५ घर भई हाल भरतपुर म.न.पा.९ मा डेरा गरी बस्ने बर्ष १८ का महेश यादव, सप्तरी जिल्ला राजबिराज न.पा.वडा नं. ८ घर भई हाल भरतपुर म.न.पा.९ मा डेरा गरी बस्ने बर्ष २० का बिबेक यादव र चितवन जिल्ला भरतपुर म.न.पा.७ बस्ने बर्ष २० का संयोग अधिकारी रहेका छन् ।
चितवन प्रहरी प्रमुख दान बहादुर मल्लका अनुसार उनिहरुले मंसिर १ गते रातको समयमा भरतपुर म.न.पा.वडा नं. १० स्थित हाकिमचोकमा रहेको सरस्वती ढकालले संचालन गरेको न्यु दक्षिणकाली सुनचाँदी पसलबाट रु. ६ लाख बराबरको चाँदीको गरगहनाहरु चोरी गरेका थिए ।
साथै सोही चोरहरुले भरतपुर म.न.पा.वडा नं. १० मा रहेको लेखनाथ शर्मा आचार्यको घरमा रहेको पसलको सटर फुटाई रु.४० हजार बराबरको मदिरा र नगद रु.३५ हजार चोरी गरेका थिए । साथै रोचक कुरा त के छ भने चांदी, मदिरा र नगद संगै उनिहरुले अमिलोका पत्ताहरु पनि चोरी गरेका थिए ।
प्रहरीले चोरीमा संलग्न व्यक्तिहरुको खोजतलास गर्ने क्रममा मंसिर २८ गते बिहान ७ः३० बजेको समयमा भरतपुर म.न.पा. ९ हाकिमचोक स्थित बिबेक यादवको डेराकोठामा चोरी गरेको चाँदीको गरगहना र मदिराहरु बरामद गरेको थियो । बरामद सामानलाई आधार मानि प्रहरीले अनुसन्धान गर्दा सो तीनै जना व्यक्तिहरुलेनै चोरी गरेको खुल्न गएपछि पक्राउ गरिएको जनाएको छ । प्रहरीले पक्राउ परेकाहरुलाई चोरी मुद्दा दर्ता गरि ५ दिनको अदालदबाट हिरासतमा राख्ने अनुमती प्राप्त गरिे अनुसन्धान प्रकृया अगाडी बढाईएको जनाएको छ ।